गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्दा एमालेले कति ठाउँ जित्ला ? यस्तो छ आन्तरिक प्रक्षेपण
- जनक नेपाल | बिहीबार, चैत १७, २०७८
सार्वजनिक मञ्चहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन दलहरूलाई एक–एक किलो र आफ्नो पार्टी एक्लै क्विन्टलको ढक भनिरहेका छन् । एक्लै लड्न नसक्ने भएरै पाँच दलले गठबन्धन बनाए पनि एमालेले जित्ने भन्दै ओलीले कार्यकर्ताको मनोबल उचो राख्ने कोसिस गरिरहेका छन् । तर, एमालेले भित्रभित्रै भने गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्दा ब्यहोर्नुपर्ने क्षतिको हिसाबकिताब गरिरहेको छ ।
केही दिनअघिसम्म ओलीलाई सत्तारुढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन बनाउलान् भन्ने विश्वास थिएन । आफूलाई भेट्न बालकोट निवास पुग्ने जिल्ला नेताहरूलाई उनले भन्ने गरेका थिए, ‘गठबन्धन त भत्काइन्छ, भत्काइन्छ । यो देशमा केपी ओली पनि छ ।’
तर, पक्ष-विपक्षमा लामो कचिङ्गलपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सत्तारुढ दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिदियो । एक्ला–एक्लै चुनाव लड्दा २०७४ मा भन्दा धेरै जित्ने विश्लेषण गरेको एमालेलाई गठबन्धनले चुनौती थपिदिएको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली माधव नेपालको पार्टी थपिएबाहेक गठबन्धनको सामना आफूहरूका लागि नौलो नभएको बताउँछन् ।
‘पहिले पनि गठबन्धनको सामना गरेकै हो, थपिएको भनेको माधव नेपालको गुट न हो,’ ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने, ‘एमालेलाई गठबन्धनसँग एक्लै लड्ने बानी परिसकेको छ । त्यसैले अघिल्लो चुनावभन्दा नतिजामा फरक पर्दैन ।’
एमाले विभाजन भई नेता नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा पार्टी संगठनमा देशभर धेरथोर असर देखिन्छ । एमाले पङ्ति भने पार्टीको पक्षमा जनलहर आएको दाबी गरिरहेको छ । केहीअघि बसेकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेशस्तरीय रिपोर्टिङमै एक्ला–एक्लै चुनाव लड्दा ६० प्रतिशतसम्म जित हासिल हुने विश्लेषण गरियो ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हौसिएरै रिपोर्टिङ आएको छ । तर, गठबन्धन सामाना गर्दासमेत एमालेको पहिलेको स्थिति घट्दैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने । अध्यक्ष ओलीले सोही रिपोर्टिङका आधारमा ६० देखि ७० प्रतिशत जित्ने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनकै कारणले एमालेले ठूलो क्षति ब्यहोर्ने सम्भावना कमै रहेको तामाङ बताउँछन् । ‘पार्टीका नेता–नेता वा कार्यकर्ताको पो गठबन्धन हुने होला । जनताले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन । म अहिले सिन्धुपाल्चोकको गाउँमै छु, गाउँमा एमालेको पक्षमा लहर छ’, उनले भने ।
एमालेले गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्दा अघिल्लो चुनावको तुलनामा ६ प्रतिशतसम्म क्षति ब्यहोर्ने आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरिएको रिपोर्टिङ अनुसार, प्रदेश १ मा ४० प्रतिशत तह जित्ने एमाले आकलन छ । त्यस्तै, मधेस र बागमती प्रदेशमा ३५/३५ प्रतिशत जित्ने रिपोर्टिङ ती कमिटीले गरेका छन् । सबैभन्दा राम्रो नतिजाको अपेक्षा लुम्बिनी प्रदेशमा छ । त्यहाँ ४२ प्रतिशत स्थानीय तह जितिने एमालेको विश्लेषण छ । गण्डकीमा ४० प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको एमालेले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३० प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने रिपोर्टिङ गरिएको छ ।
देशव्यापी सत्तारुढ गठबन्धनको प्रतिकूल स्थिति बन्दासमेत २ सय ७१ तह अर्थात् ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा जित हासिल गर्ने एमालेको प्रक्षेपण छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै ३५ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये एमालेले १४ हजार ७ सय पदमा जित हासिल गरेको थियो । जुन कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस हिसाबले एमालेलाई कम्तिमा ६ प्रतिशत क्षति हुनेछ ।
उपमहासचिव ज्ञवाली एमाले तत्कालीन नेकपाको निरन्तरतामा रहेकाले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको ठूलो हिस्सा आफूहरूसँगै रहेको दाबी गर्छन् । त्यस्तै, तराई–मधेसमा एमाले प्रवेशको लहर चलेकाले देशैभर गठबन्धन हुँदासमेत २०७४ भन्दा राम्रो परिणामका साथ एमालेले चुनाव जित्ने उनी बताउँछन् । ‘कांग्रेस एक्लै लड्न नसक्ने भएरै आफ्नो मनोबल आफै घटाएर चुनावमा आएको छ । मधेसमा अघिल्लो चुनावमा हामीलाई प्रवेश गर्नै दिइएको थिएन् । तर, यसपटक एमालेप्रति व्यापक आकर्षण छ’, ज्ञवालीले भने, ‘यसपटक मधेसमा हामी धेरै ठाउँ जित्छौ ।’
ज्ञवालीले भनेजस्तै तराई–मधेसमा एमालेको पक्षमा लहर आएकै हो त ? मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह अघिल्लो चुनावको तुलनामा एमाले स्थिति सुध्रिएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला आन्दोलनको राप–ताप थियो । ओलीलाई निसाना बनाएर उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले मत आफूतिर तानेका थिए’, साह भन्छन्, ‘ओलीलाई घृणाको पात्र बनाउने उपेन्द्रजी र महन्थजी नै पालोपालो उनैको सरकारमा गएपछि मधेसमा ओलीप्रतिको नकारात्मक धारणा ह्वात्तै घटेको सत्य हो ।’
२०७४ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एमालेले १८ वटामा जित हासिल गरेको थियो । तीमध्ये पनि पहाडे समुदायको बसोबास ज्यादा रहेका राजमार्ग क्षेत्रका आठ स्थानीय तह थिए । मधेसमा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कमजोर हुँदा त्यसको लाभ एमालेले उठाउने विश्लेषक साह बताउँछन् । ‘बितेका पाँच वर्षले स्थानीय तहप्रति आकर्षण बढायो । कांग्रेस र जसपामा पुरानै नेताको बोलवाला छ, त्यहाँ गएर टिकट पाइन्न’, उनी भन्छन्, ‘पुरानो पार्टी भएकाले एमालेको एकखाले संगठित जनमत छ । त्यसमा लोकप्रिय नेता प्रवेश गराएर जित निकाल्ने रणनीति देखिन्छ ।’
पाँच दलीय गठबन्धन बलियो र सफल हुँदैन भन्ने एमालेको विश्लेषण छ । गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा एमाले छ । ‘एउटै पार्टीमा त तलदेखि माथिसम्म मिलाउन कठिन हुन्छ । दशतिर फर्किएका दलहरू एकठाउँ आउँदा एकआपसमै अविश्वास हुनेछ र गठबन्धन असफल हुन्छ’, एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन् ।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने जतिसुकै चर्को भाषण गरे पनि एमालेले चुनावी तालमेलको ढोका भने खुलै राखेको छ । त्यसले सत्ता साझेदार इतरका राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गर्ने उसको रणनीति छ । ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ । कुनै पालिका वा वडामा स्थानीय आवश्यकताले त्यही तालमेल गर्न भने ढोका खुलै राखेका छौँ ।’
राजनीतिशास्त्री डा जनार्दन आचार्य अहिलेको चुनावी समीकरणको लाभ कांग्रेसलाई मात्र हुने बताउँछन् । बामपन्थी जनमतको बलमा गठबन्धन कायमै राखेर पुनः संघीय सरकारमा फर्किने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति बुझेर पनि बामपन्थीहरू विभाजित भइरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘एमाले भन्नुस् वा माओवादी विचारले टाढा छैनन् । नेताका स्वार्थ, इगो र कुण्ठाले मात्र उनीहरू विभाजित छन् । देशमा वामपन्थीको बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले लाभ उठाइरहेको छ’, आचार्य भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १७, २०७८, २०:१०:००